Ndị na-a waterụ mmiri →→ụ → •lọ • partmentlọ • Warsaw ụlọ
You chọrọ onye na-enye mmiri n'ụlọ? Companylọ ọrụ Water Point na-enye onyinye ndị na-abụghị mmiri cylinder, ndị na-akersụ mmanya, isi mmalite nke ndị isi ụwa na ụlọ ọrụ ahụ, nke anyị bụ ndị nkesa naanị na Poland.
Dom bụ ebe anyị na-etinyekarị oge anyị. Anyị chọrọ ka obi dị anyị mma ma nwee nsogbu ebe a. Ọ bụ ebe a ka anyị ji akwadebe nri, zuo ike ma rụọ ọrụ ọtụtụ oge. Kwa ụbọchị n'ụlọ, anyị na ezinụlọ na ndị enyi, anyị na-a aụ ọtụtụ iko mmiri. Yabụ na anyị tụrụ anya mmirianyị ji adị ọcha ma nwee ahụike ma nwee ọmarịcha uto. Anyị ga-enwenwe obi iru ala na ịdị mma nke inweta mmiri dị otú ahụ onye na-a drinkingụ mmiri n’ụlọ.
Accessnweta mmiri ọ fromụ fromụ mgbe niile site na onye na-ere ihe, na-agaghị efe efe na kemịkalụ kemịkalị, ga-eme ka anyị nwee ahụ ike ogologo oge na mgbakwunye, na-elekọta gburugburu anyị site na ibelata ego mkpofu, ma ọ bụ karama mmiri eji.
Onye ọrụ igwe ọ drinkingụ waterụ na mmiri ọ modernụ andụ dị ugbu a dị mkpa na ezinụlọ, ọ na - eme ka ndụ dịkwuo mfe, n'ihi na ọ dịghị mkpa ịzụrụ mmiri nwere karama ma zuo ike na ya. Mbelata ego mkpofu n’ụlọ anyị bụkwa ihe dị mkpa maka ilekọta gburugburu ụwa.
Fresh drinkingụ mmiri dị ọcha mgbe niile na -eme ka ahụ ike anyị dị ọcha ma na - azụlite ezigbo nri n'ime ndị otu ezinụlọ.
N'ihi onye na-a waterụ mmiri na-a drinkingụ mmiri, ị nwere ike ịkwadebe ọ bụghị naanị mmiri dị ụtọ, kamakwa mmiri lemonade ma ọ bụ mmiri na-adọrọ adọrọ, na ụdị nke ngwaọrụ ahụ ga-emesi ike banyere ọdịdị ụlọ ọ bụla.
Mmiri nke anụ ahụ na - eme ka anụ ahụ ghara iguzogide ọrịa, gụnyere ọrịa nje, n'ihi na mmiri imi anya nke ọma, imi na ọnụ bụ ihe mgbochi dị mma maka nje microgenganisms na - awakpo anyị. Waterrinụ mmiri dị mma ma dị ọcha nwekwara mmetụta dị mma n'ọdịdị anụ ahụ anyị na-egbu oge usoro ịka nká yana ọdịdị nke wrinkles. Rationkpa ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-emetụta ụcha anụ ahụ kwesịrị ekwesị, nke na-echebe ahụ anyị.
Mmiri ahụ anyị bụ:
-Agha mkpụrụ maka nri enyere anyị ahu yana nri
- mmele nke bụ akụkụ ahụ anyị
-echikwaa ọrụ nke akụkụ anụ ahụ nke ọma, tinyere ụbụrụ
- nhazi igwe ọkụ
N’iburu nke a n’uche, cheta ị drinkụ ihe dị ka lita mmiri abụọ n’ụbọchị. Ọ kachasị mkpa maka ndị na-a medicationụ ọgwụ ma na-ata ahụhụ n'ọrịa dị iche iche.
Agbanyeghị, agụụ mmiri nke ụmụ ọhụrụ na ụmụaka dị obere karịa. Shouldmụaka kwesịrị ị drinkụ mmiri dị nro, nke nwere obere ihe eji agwọ shuga na-enweghị shuga, ekpomeekpo ma ọ bụ ntutu.
Ndị a bụ ihe mere ị ga-eji tụlee ịzụrụ igwe ihe ọ drinkingụ waterụ maka ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ gị, ebe ọ na-ekwe nkwa ịnweta mmiri dị ọcha ma dị mma mgbe niile. Ọ ga-abụ mpempe akụrụngwa kichin dị oke egwu.
Ndị na-a waterụ mmiri na-a allowụ mmiri na-enye ndị ezinụlọ dum ezigbo nri. Ngwaọrụ ndị a ga-adị mfe ma dị ụtọ iji onye ọ bụla, ọbụlagodi ezinụlọ nke ọdụdụ, n'ihi na arụmọrụ na ike siri ike mara ha.
mmiri anaghị eji cylinder agbapụta mmirimmiri ọkụ n'ime ụlọ n'otu ezinụlọmmiri ọkụ n'ime ụlọhichaa mmiri mmirimmiri na-akwụghị ụgwọ n’ụlọebe obibi mmiriebe obibi mmiriọnụahịa ụlọ mmirinyocha ụlọ mmiri na-enyocha mmirionye na-enye mmiri maka ụlọ WarsawOnye na-enye mmiri ikuku carbonatedonye na-enye mmiri carbonated maka ụlọ Warsawebe obibi mmirionye na-enye mmiri na ulondị na-a homeụ mmiri n’ụlọndị na-enye mmiri mmirimmiri carbonatedmmiri carbonated n'ụlọmmiri ọkụnhazi mmiri na ụlọihe mmiri na-enye maka ụlọmmiri dị nro n’ụlọsi na mgbatammiri siri ike n'ụlọnke nwere mmiri n'ụlọmmiri ụlọmmiri na-adọrọ adọrọ n’ụlọmmiri ịnweta n'ụlọa drinkingụ mmiri n’ụlọmmiri dị ụtọ n’ụlọmmiri soda ke ufọkmmiri n'ime ụlọmmiri n’ime nrụnye ụlọ ahụmmiri dị n'okpuru ala ụlọ ọhụrụmmiri dị mma n’ụlọmmiri nke ọmammiri oyimmiri ụla ụlọ